Ny fiara avy amin'i Volkswagen Dia hoentina tahaka an'io - RayHaber
HomeTORKIACentral Anatolia26 EskisehirNy fiara avy amin'ny Volkswagen Dia hoentina tahaka an'io
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, Central Anatolia, Railway, Railway Vehicles, ANKAPOBENY, Headline, TORKIA, sariety 0
Ny fiara ho an'ny volkswagen dia hoentina tahaka an'io
Torkia loha masiny sy Engine Industry toy ny (TULOMSAS), alemà goavana Volkswagen fiara mba ho vokarina any amin'ny orinasa vaovao mazava mba hampitoerina amin'ny Torkia no antenaina hitondra "roa rihana sarety" nitranga fahiny sary, ny voalohany teo amin'ny HaberTürk ... Eto any Torkia, TULOMSAS ' sarinà sarety roa vita rihana novolavin'ireo injeniera, teknisiana ary mpiasa any amin'ny trano Eskişehir.
Ho an'ny vaovao momba an'i Olcay Aydilek avy ao amin'ny Habertürk Tsindrio
OMSAN manondrana fiara amin'ny Rail 25 / 12 / 2013 OMSAN dia manamboatra fiara amin'ny Rail: OMSAN dia nanamboatra fiara fitaterana fiara fitaterana an-tsarimihetsika ao Romania. Torkia mpitarika orinasa fiara fitaovana OMSAN, dia nanampy iray vaovao ho sariaka ny tontolo iainana sy ny fifaninanana fanao. OMSAN, izay nanao ny anarana ho an'ny tenany manokana amin'ny fanentanana avo lenta momba ny tontolo iainana sy ny fanaovana fifaninanana, dia nanangona fiara fitaterana fiara ho ampiasaina amin'ny fiara fitaterana an-dàlambe eo anelanelan'i Piteşti sy Constanta any Romania. Ny sarety koa dia ny andiam-pitrandraon-tseran'ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny Piteşti / Romania sy Orhanlı / Istanbul. Kürşad ÜNLÜ, OMSAN Vehicle Transport Manager, dia nilaza fa mbola hanohy hanome vahaolana lojistika izy ireo izay hanome lanja ny tontolo iainana sy ny mpanjifany.
Mihaona ao amin'ny The Quail ny fiara matanjaka indrindra sy lafo vidy eto amin'izao tontolo izao 21 / 08 / 2019 Ny Quail, 17, naseho ho iray amin'ny hetsika motorsport malaza indrindra eto an-tany. fotoana tamin'ny The Peninsula Hotels. Nanatrika ny hetsika i James Masden, Mark Webber, Hannah Bronfman sy Brendan Fallis, izay nanasongadina famoriam-bola miavaka sy tsy fahita firy manerana an'izao tontolo izao. By Peninsula Hotels 17. fotoana natao tamin'ny hetsika Quail tany Carmel Valley California. Mitambatra ho fanatanjahantena motor sy olona tia fiara manerana an'izao tontolo izao, manasongadina singa tsy fahita firy sy kilasy tsy hita hadino ny hetsika.
Ny tetikasa Ankara-Izmir YHT dia mikasa handefa mpandeha mpandeha 6 isan-taona 13 / 06 / 2012 Ny seranam-piaramanidina avo (YHT) Eskisehir, Konya, dia namadika ny làlana mankany Izmir. Rehefa tontosa ilay tetikasa dia hihena ny 8-10 eo anelanelan'ny tanàna roa amin'ny 3 hatramin'ny ora sy sasany. Ny dingana voalohany dia nalaina ho an'ny YHT teo amin'i İzmir sy Ankara. Ny famoahana ny dingana voalohany amin'ny tsipika, Ankara-Afyonkarahisar, dia nofaranany. Nofehezin'ny fifanarahana koa ny fifanarahana. Na dia mandeha aza ny asa ho an'ny dingana faharoa amin'ny tetikasa dia ny tanjona dia ny hanatontosana haingana araka izay tratra. Miaraka amin'ny tetikasa Ankara-İzmir YHT Ankara-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Uşak sy Uşak-Manisa-İzmir, ny tetikasa Ankara-İzmir YHT dia mikasa hitondra ny mpandeha 3 amin'ny YHT isan-taona. Ny fotoana manelanelana an'i Ankara sy Izmir miaraka amin'ny totalin'ny kilometatra 6 dia ora 624 ora
OMSAN manondrana fiara amin'ny Rail
Ny tetikasa Ankara-Izmir YHT dia mikasa handefa mpandeha mpandeha 6 isan-taona
Teknolojian'ny fiara fitateram-bahoaka avy any Chine, 1200 dia hitondra mpandeha (Video)
Ny zaza ao Kecioren dia halefa amin'ny fiantsonan'ny fiarabe amin'ny fianarana
Ny tetikasam-bahoakan'i Adapazarı dia halefa ary hoentina alohan'ny hanombohana ny sidina
TÜVASAŞ ho Movable (Video)